12v Carbon Crystal Carating Crystal Carat Crystal China Manufacturer
Nkọwa:Ngwongwo infrared nke ukwuu maka oche ụgbọala,12v Ụlọ ihe nkiri ụgbọala,Ntuzi onwe onye Ịgba chaa chaa maka oche ụgbọala
Home > Ngwaahịa > Ụlọ Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ > Sistem Na-ekpocha Ụlọ Ala Seram > 12v Carbon Crystal Carating Crystal Carat Crystal
12v Carbon Crystal Carating Crystal Carat Crystal
Ihe na-ekpo ọkụ na-echekwa maka ọkụ ọkụ ụgbọ ala. Mee ka ị na-ekpo ọkụ mgbe ị na-akwọ ụgbọala. Ọ dịkwa oke mma maka ihu igwe oyi ma ọ bụ igwe mgbede . Nri ọkụ na-eri mgbe nile na-enye aka iji nọgide na-enwe nkwarụ ma nọgide na-ekesa ọbara . Ọ bụrụ na ọ dị ọhụrụ na kọntaktị dị mma na PVC, ọ bụ nduzi onwe ya, ọ bụ ihe nchekwa na ike ịzọpụta.Ọ bụ cristal crystal printing, nke nwere ụzarị ikuku infrared radiant okpomọkụ. Ọ bụghị naanị na anyị nyere ngwaahịa ahụ a na-arụ ọrụ ọkụ ma na-enyekwa ọrụ nke oru OEM.
Ngwaahịa : Ụlọ Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ > Sistem Na-ekpocha Ụlọ Ala Seram
Ngwá Agha Na-ekpo Egwuregwu Egwuregwu Na Na Na Na Na Na Na Kpọtụrụ ugbu a
Onyinye Na-ekpo ọkụ n'Ịntanet Egwuregwu Na-ekpo ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
Nkwalite Onyinye Aka Aka Na-agbanye chaja ekwentị Kpọtụrụ ugbu a
Ịkpọkọta ọgwụgwọ anụ ahụ maka Anya Kpọtụrụ ugbu a
Ihe Igwe Egwuregwu Infrared Ngwá Ngwá Agha Maka Ngwá Agha Kpọtụrụ ugbu a
Ihe Ngwongwo nke Infrared maka Moxibustion Apratus Kpọtụrụ ugbu a
12v Carbon Crystal Carating Crystal Carat Crystal Kpọtụrụ ugbu a
Ngwongwo infrared nke ukwuu maka oche ụgbọala 12v Ụlọ ihe nkiri ụgbọala Ntuzi onwe onye Ịgba chaa chaa maka oche ụgbọala Ngwongwo infrared obere fatịlaịza Ngwongwo nke infrared kpochapu Ngwongwo ihe nkiri ihe nkiri infrared nke ukwuu Ihe ngosi infrared nke kpubere Wall maka Sauna Ngwongwo na-ekpochapu ala ụkwụ